Oromo View -20 Oromo Viewn Obbo Bekele Gerba walliin Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromo View -20 Oromo Viewn Obbo Bekele Gerba walliin
ጎጃም በር እስከ ጥቅምት 3/ ባልዲ ራስ ጠራ የተባለው የሁከት ሰልፍ እስኪያልፍ ዝግ እንደሚሆን Qeerroo Salaalee አሳዉቋል
“Nannoo piyasaa jira biroo iskindiir Nagaya Baldaraa hedduu Qeerroo wajjin waal reebanii nus reebiichaa keessaa jirra. Hiriiraa Onkololeessa 2f waamame fashaleesuf achii jirra. Qeerroon gara Piyaasaa nuf birmadhaa.”
OMN:Eenyummaa Uummata Oromoo xiiqeffachuun fudhatama hin qabu jedhan Hayyuun Oromoo Prof.Abbaas Haajii Nyaamoo waliin marii taasifameen.(Onkololeessa 10,2019)
Yeroo ammaa gartuun naafxanyaa sirna duraanii deebisuuf fiigicharra jirtu Oromiyaa guutuu keessatti duula tokko eegalaniiru. Innis duula qarshiin durii kan
#Haylasillaasee fa’a gatii guddaa baasa waan taheef barbaadaa jechuun tooftadhaan maqaan jara kanaa uummata keessa faffaca’uun guyyaa guyyaan akka ka’uuf shira sirna duraanii deebisuu raawwachaa jiru. Kuni jette jettee osoo hin taane ofii ija kootin argee gurra kootin waan dhagaheedha. Namoonni oduu kana uummata keessa facaasaa jiran namoota holola kana oofaniif maallaqa kaffaluun “Qarshii dhakaa kan Atse Minilik, Nugus Haylasillaasee fa’a miliyoonan bitamaa barbaadaa” jechuun tooftadhaan namoota diinota Oromoo tahan kana tooftadhaan maqaan isaanii nama hundaan akka waammamu gochaa jiru. Namoota isaanii kan fayyaduu barbaadan tokko tokkoof kijibaan akka waan qarshii durii sana irraa bitanii fakkeessudhaan maallaqa kennaniifii ebaluu qarshii hammanatti gurgurate jedhanii uummataan gowwoomsaa jiru. Kuni tooftaa maqaa Atseewwan isaanii uummata keenya ittiin fudhachiisuu fi maqaa isaanii ittiin olkaasuu barbaadaniidha.
Kuni kijiba sobaati. Uummanni keenya holola kijibaa kan naafxanyoonni tooftadhaan diinota Oromoo ittiin faarsudhaaf oofaa jirtuun akka hin sobamne isiniif dhaamna._